ယနေ့ညသန်းခေါင်တွင်မုန်တိုင်းဖြစ်လာမည့် 23W | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
October 26, 2009 — mmweather
မြန်မာစံတော်ချိန် ယနေ့ည သန်းခေါင်ယံ အကျော်တွင် အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းကာ အင်အားပိုမိုကောင်းလာမည့် TWENTY-THREE သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ လာမည့် နာရီ ၁၂ဝ (၅ ရက်အတွင်း) ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နိုင်ခြေရှိကြောင်း ယနေ့ နေ့လည် ၁၂း၃ဝ နာရီတွင် TSR မှ သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။
ထို့ပြင် မာရီယာနာကျွန်းစု မြောက်ပိုင်းဒေသများသို့ ၂၄ နာရီအတွင်း ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နိုင်ကြောင်း အစိမ်းရောင်သတိပေးချက်ကိုလည်း ပူးတွဲထုတ်ပြန်ကြေငြာထားပါသည်။ ကြေငြာချက် မူရင်းအားအောက်တွင်ဖေါ်ပြပေးထားပါသည် –
Storm Alert issued at 26 Oct, 2009 6:00 GMT
Tropical Depression TWENTYTHREE is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):
probability for CAT 1 or above is 15% in about 120 hours
probability for TS is 20% in about 120 hours
Sorsogon (13.0 N, 124.1 E)
Oras (12.1 N, 125.4 E)
Mamburao (13.2 N, 120.7 E)
Tacloban (11.2 N, 125.2 E)
Storm Alert issued at 26 Oct, 2009 6:00 GMT (မြန်မာစံတော်ချိန် အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက် နေ့လည် ၁၂း၃ဝ နာရီ ထုတ်ပြန်ချက်)
Hagatna (13.5 N, 144.8 E)
လာမည့် ၂၄ နာရီတွင် မာရီယာနာကျွန်းစုနှင့် ဂူအမ်ကျွန်းတို့သို့ ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နိုင်သည့် ဒေသများအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေပြပုံ
လာမည့် နာရီ ၁၂ဝ တွင် ဖိလစ်ပိုင်သို့ ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နိုင်သည့် ဒေသများအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေပြပုံ
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: tropical-depression, tropical-storm, twentythree, weather. 1 Comment »
One Response to “ယနေ့ညသန်းခေါင်တွင်မုန်တိုင်းဖြစ်လာမည့် 23W”
Get this post in PDF format
« ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုခြိမ်းခြောက်ဦးမည့် TWENTY-THREE
အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာသော 23W TWENTY-THREE »